DALLANSUUNU QABSOODHA !!! « QEERROO
Maddi Qabsoo hacuuccaadha. Namni ykn Ummati miidhaan irra jiru yoo xiqqaate dallansuun , miidhamu isaa ibsata. Namni waa aarees, dallansuun of ibsata. Namni odoo hidhamuu, hiraarfamuu , ajjeefamuu , beela’uu ….kan kolfu jira yoo jenne, warra hacuuccaa fi tajaajiltummaa qaama taasifate , Ykn warra salphina keessa gangalachuu baree ,maal naan jedhuu of keessaa fixate qofaadha.
Har’a Ummata Oromoo caalaa hacuucamaa kan jiru jira jecuun rakkisaadha. Osoo ta’ee miidhaa waggaa 150 ol nu irra ture kanaan, dallannee , dallansuu kanas ofirraa faccisuutti geeddarree , miidhaa nu irra jiru ofirraa darbannee , Abbaa Biyyaa ta’uutu nuuf mala ture. Kun nuuf qaaniidha.nama qaanii ta’uu keenya kanatti dammaqinee har’as yoo hin foyya’iin rakkoo daran hammaataaf teenya.
Kun akka jirutti ta’ee , hacuuccaa nu irra jiru kana of irraa kaasuuf, har’allee humna biro eeggachun keenya heddu nama gaddisiisa. Diina gola keenya seenee qabeenyaa keenya akka barbaadu saamaa jiru callifnee ilaallee , qabsoo bifa biraa eeggachuun keenya nama dinqisiisa. Dhalli oromoo hedduun har’allee maal akka gochuun irra jiru wallaalee , miidhama isaan aadataa jiraachuu taajjabna. Kana wallaaluu keenyaan walitti dhibaa’uu dhiifnee waa gorsuutu fardii ta’a jennee kana dhaammanne.
Biyya keenya irratti lolla :-
Ilmaan oromoo qabsoon gaggeessinu Biyyaa keenya irrattidha. Biyya biraa irra jiraannee, biyya keenya deebisuuf itti deemaa hin jirru. Biyya namaas qaxxaa-muraa hin jirru. Siyaasi Biyya Itoophiyaa jedhamtu , Biyya keenya irratti gaggeeffama. Angoon Itoophiyaa waggaa 150 kun Oromiyaa irratti kan wal furaniidha. Biyyattiin walii gala Oromiyaa malee hin jiraattu. Addunyaanis Itoophiyaa cubbuun ijaaramte kana jiraachisu fedhan. Kanaafu gaaffii Bilisummaa dhiisaa jedhanii isa murate alatti hanbisanii, Doolaara isaaniif kan jilbeenfate ofitti qabaa jiru. Shiroota kana raga waliin yeroo isaatti walitti deebina.
Kan kana keessaa huabchuu fi dhalooti har’as ta’e Ummati kan gochuun irraa eegamu, adda baafatanii socha’uutu Umurii diinaa gabaabsa. Haaluma kanaan qaama laafina wayyaanee qorachuutu salphaa ta’a . haala kanaan wayyaaneen akka itti jirtu hubachuu nu barbaachisa.
Wayyaaneen har’a waggaa 20f Angoo irra jiraatte jirti. Wayyaaneen waraana kumoota dhibbatti lakkaa’amani fi meeshaa hanga funyaanii haa qabaattu malee , waraana kana irraa abdii tokkollee hin qabdu. Inumaayyuu fincila Biyyoota Afriikaa kaabaa booda abdiin ishee waraana irra ture hedduu laafateera. Qabxii kana irratti yaada bal’aa kaasuun ni danda’ama. Wayyaaneen amma waa sadii irratti rarraatee jirti.
Humna Tikaa fi Poliisa Fedaraalaa fi
Dinagee humnaan tu’attee jirtutti abdachuu fi,
Humnoota alaa ti.
Humna sadeen wayyaaneef lafe dugdaa ta’an kana keessaa inni hangafaa , Ummata bara baraaf cabsuuf karoorfattee irratti hojjatte, Dinagdee Biyyaa tu’attee Ummatoota gabbaarrii ishee taasisuudha.
Wayyaanoonni , waraanni fi humni tikaa ijaaran Ummata ykn Biyya bulachuuf odoo hin taane, Qabeenyaa saaman jiraachisuuf qofaadha. Wayyaaneen Angoo gadhiisuu diddee, shiroota gara garaan qabsoo Ummatootaa addunyaa biratti hammeessuuf kan tattaafattu, Qabeenyaa saaman jiraachisuuf qofaadha. Walii gala , wayyaaneen ummatoota kan hiraarsitu, hiitu , ajjeeftu , Qabeenyaa saman jiraachisuufidha. Kan warra alaatiif tajaajiltuu ta’anii hammaanya nu irratti dalaganiif , qabeenyaa saaman jiraachisuuf qofaadha.
Ega kana jennee nuuti maal raawwachuutu nu irra jira kan jedhu yoo kaafne, waan hojjachuu qabnu ifatti nutti mul’atuun hin hafu. Wayyaaneen kan nu ajjeestu Biyyaaf tolu didne odoo hin taane , Qabeenyaa keenya irratti abbaa ta’uuf waan ta’ef, qabeenyaa keenya kana irratti abbaa akka hin taane taasisuutu tarkaanfii jalqabaa ta’a. kanaaf hundi keenya waanuma dhiheenya keenya taa’ee, ajjeechaa keenyaaf sbabaa kan ta’e tu’achuun dansaadha.
Qabeenyaa naannoo keenyaa diina nu irratti irroomsee jiru , diinni akka itti hin fayyadamne taasisuutu furmaata. Diinni lafa keenya irraa nu buqqisee, omisha isaa rakkoo tokkoo malee yennaa galfatee biyya alaatti fe’atu , eenyutti aarra ? eenyutti gaabbina. Waan Dargaggeessii tokko qophaa isaa raawwatee diina rifaasisu danda’uu guute odoo jiru, ajaja maalii eegganna ? mana keenya keessatti qotee, aramee, haammatee, konkolaataan yennaa fe’atu maal hojjanna ? nagaan galii jennee osoo beelofnu gaggeessinaa ? namni dachee keenya hin beekne KM kumoota kodhaniin demee dhufee , dachee keenya irraa nu buqqisee yennaa nu saamu eenyuttii quba qabana ? maaliif addunyaa irraa hin barannu ?
Ganda qotee bulaa tokko buqqisee , habaaboon omisha jedhee , abbaa biyyaa hojjataa isaa taasifatee, maallaqa guyyaa tokko nama hin olchineen qacaree ofii ammo biliyoonaan saamee Biyya isaatti gaafa fe’atu teenye ilaallee , mataa hoqqaachaa jiraachuun maal jedhama ? wayyaaneen , kan irroomte qabeenyaa keenyaan ta’uun ifadha. Maarree kana of irraa dhaabuuf qabeenyaa kabachiisutti maaliif hin bobbaanu. Kun ajajaa fi wal ilaalu gaafataa ?
Faranjii Biyya keessa nu yaa’ee raajii nu hojjataa jiru, bakka ga’etti yoo dhukkee irraa kaafne, maal hojii ganda keessa nu deema ? faranjii lubbuu ishee harka ishee irratti baattee deemtu , garuu wayyaanee jiraachisu keessatti shoora guddaa taphachaa jirtu maaliif callifnee ilaalla ? Hojjataan yoo xiqqaate yoo dallane, daldalaan , qotee bulaan, Barataan bakka jirutti yoo diddaa argisiise , qabsoon Oromoo dhageetti horatee wayyaanee akka jilbeenfachiisu hin shakkiinaa .
Wayyaanonni har’a xiyyeeffannaan isaanii qabeenyaa isaanii qofa ta’uu hin dagatiinaa. Wayyaanee kan hollachiisu, qaamuma qabeenyaa dhunfaan horatanitti duulu qofaadha. Warra jala deemtoonni fi maqaa investimatiin socha’an hunda irratti duulutu furmaata . Oromoom carraa wayyaanee itti jilbeenfachiisu danda’uu kana of harkaa baasuu hin qabu. Wayyaanootaa fi warra wayyaanee utuban teessoo haa dhabsiifnu. Qabbana haa dhabsiifnu . har’a miidiyaa isaanii irratti warri sooreessi isaanii iyyuu kan eegalan, qabeenyaa isaanii irratti ummati kaanaan ta’uu hubachuu barbaachisa. Hundumtu bakka jirutti wayyaanee irraa kolfa dhaabee, diinummaa isaaniitti amanee mana koo keessa maggalu hin dandeessu jechunii qaba. Kilo-meetira hedduu Biyya keenya keessa socha’uu dhorkuu qabna. Faranjii maqaa gargaarsaa fi investimantii nu keessa yaatee nu basaastee wayyaaneef tarsiimoo sirna gabroomsaa baaftu dura haa dhaabbannu. Nuuti ni duuna . isaan nu irratti bashannanu. Kun maal jechuudha ?
Dhalooti har’aa toftaa mana isaa boroo jiruun fayyadamu qaba. Diina gooba baasee nu irra ciise kanatti, abidda qabsiifne nagaa dhorkuu qabna . humnoota alaa kan jedhaman magaalaa kamuu keessa akka hin qubannee dhorkuun nama rakkisaa ? wayyaanee fi tajaajiltoota har’a maqaa Tiwulidda Itoophiyaawwii jedhanii mallasiin baraaruuf Biyya alaa seenan bakka jiranitti itti haa duullu. Qabsoon bifa hedduu qabaachuu har’a walitti himuun barbaachisaa hin ta’u. haa ta’uuti hundumtu bakka jiru bitaa fi mirga yoo ilaale , waan diina kana of irraa ittin ari’u guute jira.
Weenniin gogaa isheef akkuma ajjeefamtu, Ilmaan Oromoos qabeenyaa isaaniif jedhamee ajjeefamaa jirra. Qabeenyaa humna halgaaf ta’aa jiru kana , akka hin taane taasiuun ni danda’ama. Inveestara har’a nu irratti maggalu kana , dachee abbaa keenya irratti ,,,,, jedhanii gaaffii kaasuun qabsoodha. Beenyaa warra keenyaaf kaffalii jechuun qabsoodha. Gibirri ati kaffaltu meeshaa ittin ajjeefanu bitaa jiraa nurraa ba’iii jechuun qabsoodha.
Warraa faranjiin ammo, isin Biyya keessan keessatti nama nama ajjeesu miti , ija hamaanu ilaale seeratti dhiheessitanii , Biyya keenya keessatti, kan nama jimulaan fixu waliin akkamiin dhaabbattan ? jedhanii gaafachuun qabsoodha. Abbootiin keenya bakka qotan dhabanii rakkatu , ati asitti nu qochisiftee , nu aramsiiftee, Biyyaa keetti ergaa jirtaa nu irraa dhaabbadhu jechuun qabsoodha. Qabsoon bifa hedduu qaba. Maal goonaa ? of irraa dhaabnee , waanuma dallasuun rifaasisu dandeenyu illee haa hojjannu. Waan Biyya keessaa fi alatti tokkummaan eegallee kana caalaatti haa finiinsinu.
NI JABAANNA MALEE DUUBATTI HIN DEEBINU,JABAADHA JAJJABAA DHA YAA QEERROO QABSOO BILISUMMAA OROMOO !